Izinsimbi Eziyigugu Zensimbi
Insimbi Eyigugu Colloidal
INano C60 Fullerene
I-Nano Diamond Powder
I-Carbon Nanotubes enezindonga eziningi
I-Carbon Nanotubes Engabodwa Eyodwa
I-Carbon Nanotubes Enezindonga Ezimbili
Ama-Nanotubes we-Carbon Nanothubes Ahlanganisiwe
Isiliva eliboshwe ngethusi powder
Izinsimbi ze-oxide Nanoparticles
Ama-Cuprous oxide Nanoparticles
I-Aluminium oxide Nanoparticles
I-Titanium Dioxide Nanoparticles
I-Silicon Dioxide Nanoparticles
Ama-Nanoparticles we-Tungsten oxide
UNickle oxide Nanoparticles
I-Antimony Trioxide Nanoparticles
I-Bismuth Oxide Nanoparticles
I-Indium oxide Nanoparticles
I-YSZ Yttria Izinzile I-Zirconia
Ama-Nanoparticles we-Yttrium oxide
Ama-nanoparticles we-Barium Titanate (BaTiO3)
I-Titanium Nitride Powder (TiN)
I-Silicon Nitride Nanoparticles
I-Boron Carbide Powder (B4C)
I-Silicon Carbide Powder (β-SiC-p)
I-Titanium Carbide Powder (TiC)
I-Titanium Diboride Powder (TiB2)
Ama-Nanowires Wethusi (CuNWs)
I-Nickel Nanowires (NiNWs)
AmaNanotubes eBoron Nitride
Ama-nanomaterials aqhubayo nawaphikisayo asetshenziswa ezimbonini zezindwangu namakhemikhali
Ukuthuthukiswa kwe-nanotechnology nama-nanomaterials kunikeza izindlela nemibono emisha yokuxhashazwa kwemikhiqizo ye-antistatic. Ukusebenza, i-electromagnetic, super absorptive and broadband izakhiwo zezinto ze-nano, kudale izimo ezintsha zocwaningo nentuthuko ye-conduc ...
Ngama-nanoparticles wethusi we-cesium tungsten, isikhathi sokufakwa kokushisa okuhlakaniphile sesifikile!
Ingilazi yokushisa ukushisa ingubo ingubo elungiselelwe ngokucubungula into eyodwa noma eziningana ze-nano-powder. Izinto ze-nano ezisetshenzisiwe zinezici ezikhethekile ze-optical, okungukuthi, zinezinga eliphakeme lokuvimbela ezindaweni ze-infrared ne-ultraviolet, kanye nokudluliswa okuphezulu esifundeni sokukhanya esibonakalayo. Us ...
Izinto zeNanoparticles nezinto zobumba ze-Piezoelectric
Izinto zobumba ze-piezoelectric luhlobo lolwazi olusebenzayo lwezinto zobumba ezingaguqula amandla womshini namandla kagesi komunye nomunye. Kungumthelela we-piezoelectric. Ngokungeziwe ku-piezoelectricity, i-piezoelectric ceramics nayo ine-dielectricity, elasticity, njll., Ebisetshenziswa kabanzi ...
Isakhiwo se-Photocatalytic seNano titanium dioxide TIO2 izinhlayiya
I-Nano-titanium dioxide TIO2 inomsebenzi ophakeme we-photocatalytic futhi inezinto ezibaluleke kakhulu ezibonakalayo. Ngezakhiwo zamakhemikhali ezizinzile nemithombo eningi yezinto zokusetshenziswa, njengamanje iyi-photocatalyst ethembisayo. Ngokuya ngohlobo lwe-crystal, ingahlukaniswa nge: T689 rutil ...
Isicelo se-Antibacterial se-Nano Copper oxide Powder CUO
ICopper oxide nano-powder iyinsimbi ensundu emnyama emnyama oxide powder enokusetshenziswa okuhlukahlukene. Ngaphezu kwendima yama-catalysts nezinzwa, indima ebalulekile ye-nano-copper oxide i-antibacterial. Inqubo elwa namagciwane yama-oxide wensimbi ingachazwa kalula ngokuthi: Ngaphansi kokuthakazelisa kokukhanya ...
Amathemba wokusebenzisa we-graphene nitrogen-doped graphene esebenzayo
Ukuthuthukiswa kwamandla ahlanzekile futhi avuselelekayo kuyisu elikhulu lokuthuthukisa izwe lethu kwezenhlalo nakwezomnotho. Kuwo wonke amazinga obuchwepheshe obusha bamandla, ukugcinwa kwamandla kagesi kunesikhundla esibaluleke kakhulu, futhi kuyinkinga enkulu ocwaningweni lwamanje lwesayensi. Njenge ...
Yazi ngokushesha mayelana ne-Silver Nanowires Preparation, Performance, Parameters and Application
Kunobuchwepheshe obuningi embonini yezinto zokwakha, kepha bambalwa abenziwe izimboni. Ucwaningo lwesayensi lucwaninga inkinga "kusuka kuziro kuye kokunye", futhi okumele kwenziwe izinkampani ukuguqula imiphumela ibe yimikhiqizo ekhiqizwa ngobuningi enekhwalithi ezinzile. I-Hongwu Nano manje i-indu ...
I-Cerium Oxide Nanoparticles Ingasiza Ukuvimbela Ukwakheka Kwe-Biofilm kanye ne-Caries
Uma ukulahleka kwezinwele kuyinkinga yabantu abadala, khona-ke ukubola kwamazinyo (igama lesayensi eliguqukayo) kuyinkinga ejwayelekile yekhanda kubantu bayo yonke iminyaka. Ngokwezibalo, izehlakalo zokushaywa kwamazinyo phakathi kwentsha ezweni lami zingaphezu kwama-50%, izehlakalo zamazinyo phakathi kwabantu abaneminyaka ephakathi nendawo seziphelile ...
Amathemba wokusebenza we-graphene esebenzayo: i-nitrogen-doped graphene
Ukuhlakazeka kweNano Silver Antibacterial, Monomer Nano Silver Solution, Nano Silver Colloid
Ukusabalalisa kwe-Nano silver antibacterial, monomer nano-silver solution, ne-nano-silver colloid konke kubhekisela kumkhiqizo ofanayo lapha, okuyisisombululo sezinhlayiya ze-nano-silver ezihlakazeke kakhulu. Umphumela wayo wokulwa namagciwane uphakeme kakhulu, futhi unenzalo ngemiphumela ye-nano. Isikhathi sokulwa namagciwane ngu-lon ...
Olunye ulwazi oluyisisekelo mayelana ne-nano silver colloid
Esikhathini sangaphambi kwama-antibiotic lapho i-nanotechnology ingakaphumi, kunzima ukukhuthaza ubuchwepheshe besiliva elwa namagciwane ngaphandle kokugaya impuphu yesiliva, ukusika ucingo lwesiliva, nokwenza izinto eziqukethe isiliva. Isakhi sesiliva kufanele silawulwe ngaphakathi kwe-concentratio ethile ...
Isimiso Sokuqhutshwa Kokushisa KwamaNanodiamonds
Ku-crystallography, isakhiwo sedayimane sibizwa nangokuthi i-diamond cubic crystal structure, esakhiwa ukubumbana kwama-athomu ekhabhoni. Izici eziningi ezeqisayo zedayimane ziwumphumela oqondile wamandla we-sp³ covalent bond akha isakhiwo esiqinile nencane ...
I-Copper oxide nanoparticles ingabulala amangqamuzana omdlavuza
I-Copper oxide nanopowder iyimpuphu ensimbi emnyama ensimbi enokusetshenziswa okuhlukahlukene. Ngaphezu kwendima yama-catalysts nezinzwa, indima ebalulekile ye-nano copper oxide i-antibacterial. Inqubo elwa namagciwane yama-oxide wensimbi ingachazwa kalula ngokuthi: Ngaphansi kokuthakazelisa kokukhanya ...
Indima Ebalulekile Yensimbi ye-Molybdenum Mo powder
I-Metal Molybdenum powder, i-Mo nanoparticles, njengensimbi ebalulekile engabalulekile ibamba iqhaza elibalulekile emkhakheni wokuncibilikisa insimbi, ukutholwa, i-aerospace, imithi, ezolimo, ama-catalysts, nobumba. Okokuqala, isicelo ngensimbi. Inhloso enkulu ukukhiqizwa kwezinhlobo ezahlukahlukene ze-molybdenum ...
Anticorrosive, Antibacterial, Anti-fouling Nanomaterial Isingeniso
Ukuhlanjululwa kwezinto eziphilayo zasolwandle kungadala umonakalo ezintweni zokwenziwa kobunjiniyela basolwandle, kunciphise impilo yokusebenza kwezinto, futhi kudale ukulahleka okukhulu kwezomnotho nezingozi eziyinhlekelele. Ukusetshenziswa kwezingubo zokulwa nokungcola kuyisixazululo esivamile sale nkinga. Njengoba amazwe emhlabeni jikelele akhokha ngaphezulu ...
Ukuqhathaniswa kokuhlolwa kwe-Thermal test phakathi kwe-cesium-doped tungsten oxide Cs0.33WO3 ingilazi nengilazi ejwayelekile
Ukukhanya kwe-infrared kunomphumela obalulekile wokushisa, okuholela kalula ekwandeni kwezinga lokushisa kuma. Ingilazi ejwayelekile yokwakha ayinamphumela wokufaka ukushisa ongatholwa kuphela ngezindlela ezifana nokuqopha ifilimu. Ngakho-ke, ingilazi yezakhiwo, ifilimu yemoto, izakhiwo zangaphandle, e ...
Ithimba Lethu Liya Ngaphesheya Ukukunikeza Isevisi Ephumelelayo yeNanomaterial Nesevisi Engcono Kakhulu. Xhumana Nathi Namuhla! Izinsizakalo: Ama-nanoparticles ayigugu ensimbi, ama-nanoparticles wensimbi, ama-metal oxide nanoparticles, ama-nanotubes, ama-nanowires ne-colloidal
R307, Chuangkegu, No.43 Tangdong East Road, Isifunda iTianhe, eGuangzhou
© Copyright - 2002-2020: Guangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe.